सैमसंग फोन कसरी अनलक गर्न बुझ्न, तपाईँ पहिला आफ्नो उपकरणको मोडेल जान्नु आवश्यक छ। कि सोच्न amiss हुन छैन, तपाईं यसलाई लक कसरी गर्छन्। यदि मन छैन आउँछन्, त्यसपछि हामी पुक विशेष कोड, जो तपाईं कागजातहरू आफ्नो सिम कार्ड फेला पार्न सक्नुहुन्छ को पासवर्ड क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो काम गर्दैन, त्यसपछि तपाईं आफ्नो फोन विशेषज्ञ बोक्न वा अनलक गर्न प्रयास छ। यो तपाईं हाम्रो निर्देशन मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईंको फोन कसरी अनलक गर्न सैमसंग? पहिले तपाईं लक को प्रकार निर्णय गर्नुपर्छ, र तिनीहरूले भिन्न छन्। उदाहरणका लागि, आफ्नो फोन तपाईं र तपाईंको सेवा प्रदायक अवरुद्ध छैन, त तपाईं अवरुद्ध कारण पत्ता लगाउन कम्पनी कल गर्न आवश्यक छ। अक्सर यो कल गर्न आग्रह गरिएको छ पासपोर्ट डाटा सिम कार्ड होल्डर।
कहिलेकाहीं मानिसहरूले गल्ति उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ता उपकरण सुरक्षा कोड धारण छ, र त्यो भूल, तपाईंको फोन ब्लक। यस मामला मा, तपाईं मात्र विशेषज्ञ मदत र अनलक प्रक्रिया केही मिनेट लिन्छ हुनेछ। तर एक निश्चित (सधैं प्रतीकात्मक छैन) रकम भुक्तानी गर्न हुनेछ।
यद्यपि, फोन सैमसंग आफैलाई कसरी अनलक गर्न? यसलाई प्रयोग तथाकथित मास्टर कोड, यो कार्यक्रम को लागि विशेष डिजाइन गर्न सकिन्छ, तर यो सधैं, सकारात्मक परिणाम दिंदैन उत्पादन कार्यक्षमता मा हस्तक्षेप अक्सर पनि नतिजा थप दुःखद निम्त्याउँछ देखि।
सैमसंग फोन कसरी अनलक गर्न बुझ्न, तपाईं के फोन मा प्रकार्य को प्रकारको बन्द गरिएको छ निश्चित लागि जान्नु आवश्यक छ। एकाइ को मेमोरी कार्ड मा राखिएको छ भने, त्यसपछि, हाय, यहाँ आफ्नै प्रयासमा केहि हुन सक्दैन द्वारा गर्छन्। यो केवल एक सेवा केन्द्र फोन बोक्न फेरि रहन्छ, तर त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी पहुँच पुनर्स्थापना छ। यस मामला मा यो एक नयाँ मेमोरी कार्ड किन्न सजिलो छ। सामान्यतया, यो अवस्था एक व्यक्ति झुक्किएर फोन पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू दुरुस्त गर्दा हुन्छ। तपाईं यो निर्णय भने यो भन्दा राम्रो स्मृति कार्ड हटाउन छ।
Samsung सेल फोन एक साधारण अल्गोरिदम प्रयोग अनलक गर्न सकिन्छ, तर यो लागि फोन को एक सिरियल कोड आवश्यक छ। यो प्रक्रिया पछि, सबै आफ्नो स्वचालित सेटिङहरू र कुनै पनि डाटा आफ्नो फोनमा भण्डारण मेटिने। सबै छ म्यानुअल गर्न पुनर्स्थापना!
तपाईं अझै पनि व्यक्तिगत समस्या सामना गर्ने निर्णय भने, तपाईं यो तर्कको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर आफ्नो फोन अनलक को हेरफेर पूरा गर्न, तपाईं यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि सिम कार्ड बाहिर लिन र बारी सुनिश्चित। अर्को, संख्या को निम्न अनुक्रम मा प्रकार: * 2767 * 2878 # (यो चरित्र सेट पनि आंशिक छुट्टी स्रोत भनिन्छ)। कि पछि, फोन स्वचालित रूपमा बन्द। फेरि सक्रिय हुनेछ। फोन प्रदर्शन चमकता गरिनेछ भने - यो एकदम सामान्य छ, चिन्ता छैन। एक पटक चमकता, फोन अन सकियो। तपाईंले सही सबै गरे भने, यो सामान्य मोड संलग्न हुनुपर्छ। कि पछि, सबै आफ्नो डाटा रिसेट हुनेछ। फोन पहुँच बढाउनका लागि, तपाईं चार वा आठ zeros को रूप मा एक मानक कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो प्रक्रिया पछि, तपाईं सुरक्षित आफ्नो फोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केवल आफ्नो फोन अवरुद्ध गर्न सकिन्छ जसमा परिस्थिति सिर्जना गर्न होसियार हुन जारी!
Wiretapping विरुद्ध आफ्नो फोन कसरी सुरक्षित गर्ने विवरणहरू
स्मार्टफोन सोनी Xperia C3: समीक्षा
कार्टून "पिल्ला Patrol": को puppies नाम